ကိုယ်တို့အကြောင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ကိုယ်တို့အကြောင်း
အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်တစ်ဦးကရထား Save 2016 နှင့်ပြင်သစ်တွင်၎င်း၏ရထားန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့စတင်, ကျနော်တို့သူတို့ရထားလက်မှတ်တွေဝယ်ပြီးနောက်ခရီးသွားများအတွက်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ကထို option ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်စတင်ခဲ့. တွင် 2017 ငါတို့သည်လည်းအီတလီမှာရထားလက်မှတ်ရောင်းသို့တိုးချဲ့ခဲ့သည်, နယ်သာလန်, ဂျာမနီ, ဘယ်လ်ဂျီယံ, နှင့်ပိုပြီး, သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ B2B ခရီးသွားဖော်များအားလုံးအတွက်ကမ္ဘာတစ်လွှားရထားခရီးသွားလက်မှတ်များကိုမပေးမချင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ရပ်နားမည်မဟုတ်ပါ!
တစ်ဦးကရထား Save ကိုအကောင်းဆုံးရထားခရီးသွားဘလော့လည်းရထားခရီးသွားဘွတ်ကင်လုပ်ရန်ဖို့စျေးအချိုဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်.
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားမှာ, ငါတို့သည်ငါတို့၏ရထားလမ်းခရီးသည်များအတွက်အသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူသည်သင်၏ရထားခရီးသွားအောင်အာရုံစိုက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပိုက်ဆံလည်းကယ်တင်, အချိန်နှင့်ရထားဘွတ်ကင်ဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းစွာ.
မှာအွန်လိုင်းဖြစ်စေ saveatrain.com သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SaveATrain app ကိုတစျဆငျ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ခရီးသွားထောက်ခံချက်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ဥရောပတိုက်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောရရှိနိုင်ရထားလိုင်းများမှသင်၏ရထားခရီးစဉ်များအတွက်အကောင်းဆုံးရထားလမ်းလက်မှတ်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ရှေးခယျြ.
Save တစ်ဦးကရထားရဲ့မိတ်ဖက်သည်အခြား Eurostar ကြားတွင်ဥရောပမှာအကြီးဆုံးရထားအော်ပရေတာအချို့တို့ပါဝင်သည်, Trenitalia, SNCF, SBB, DB, အများအပြားကပို.
NSB Vy Norway
Deutsche Bahn ICE ဂျာမနီ
Deutsche Bahn ဂျာမနီ
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားပေါ်တွင်အတိုင်းလိုက်နာ Facebook က, တွစ်တာ, နှင့် Instagram ကို နှင့်အခမဲ့ခံစားရ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုဒီစာမျက်နှာ embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ဒီနေရာမှာပဲ click နှိပ်: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fabout-us%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / nl ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
Train Travel စကော့တလန်
ရထား Travel တူရကီ